I-aquarium yamanzi amasha | Okwezinhlanzi
I-aquarium yasemanzini angenasawoti
Njengoba sonke sazi ukuthi zikhona izinhlanzi zamanzi anosawoti nezinhlanzi zamanzi angenasawoti. Zombili zingagcinwa ziphila kuma-aquariums. Kepha ngalokhu sidinga ukwazi konke okumele kube nakho ngohlobo ngalunye lwe-aquarium. Kulesi sikhala kukhona konke okudingayo ukuze ube ne- amanzi angenasawoti lapho izinhlanzi zethu zingaphila ezimweni ezihamba phambili.
Amathiphu, imibono, impahla kanye nemininingwane, ukuze izinhlanzi zijabulele indawo yokuhlala efana ncamashi naleyo yemvelo, siyazi ukuthi ayifani, kepha uma sithanda izinhlanzi, kuyindlela enhle yokuzinakekela, ukusazisa ngendaba kanye nezimpawu noma izinto okumele sizazi futhi sibe nazo ukuze izinhlanzi zamanzi ahlanzekile zikwazi ukuhlala kwezethu amanzi angenasawoti.
Asikwazi ukukhohlwa ukuthi bangabantu abaphilayo nokuthi kufanele sibanakekele.
Yimaphi amanzi ongawasebenzisa kuma-aquariums
Uma kukhulunywa ngokuba ne-aquarium, kungaba amanzi abandayo noma amanzi ashisayo, into esemqoka ...
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-aquariums ezisetshenziselwa ukufaka inani elikhulu noma elincane lezinhlanzi. Namuhla sikhuluma nge ...
Izihlungi zangaphandle ze-aquarium
Ungahle ube ne-aquarium futhi ufuna ukuyigcina ihlanzekile futhi iphilile ngangokunokwenzeka ukuze izinhlanzi zakho zikwazi ...
Lapho sithola ithangi lethu lezinhlanzi kufanele sicabangele izici ezahlukahlukene ngaphambi kokuqala ukulisebenzisa, ngoba lezi zilwane zidinga ...
Enye yezinto engeke ilahleke ku-tropical fish aquarium yi-heater aquarium. Ngiyabonga…
Isibonisi se-Aquarium LED
Lapho siqala emhlabeni wama-aquariums kufanele futhi sicabangele ukonga amandla. Izibonisi ze-Aquarium LED ...
Lapho siqala ukusebenzisa i-aquarium yethu kufanele sazi ukuthi kukhona izinto ezithile ezibalulekile. Eyodwa…
Lapho singena ezweni lama-aquariums kuyadingeka ukuthi sibe ne-aquarium enhle esivumela ukuthi silungele ...
Amaphampu omoya ahamba phambili ama-aquariums
Njengoba usuvele uyazi, i-aquarium idinga izesekeli ezahlukahlukene ukuthi zisebenze kahle futhi zigcine izinhlanzi zethu nge ...
Ama-aquariums amahle kakhulu
Impela awuthandi i-aquarium hhayi nje kuphela ukunakekelwa kwezinhlanzi kepha futhi nokuthandeka futhi ...
Izinga lokushisa elifanele lezinhlanzi zasemanzini ashisayo
Izinhlanzi zasemanzini ezinhle kakhulu ze-aquarium yakho
Inhlanzi Yamanzi Amanga Amanzi Angahlanzekile
Ukuqaliswa kokuzilibazisa kwe-aquarium
Ukulungiselela i-aquarium yezinhlanzi ezishibhile
Ukunakekelwa kwezinhlanzi ze-Flower Horn
Ukukhiqizwa kabusha kwezinhlanzi ezi-oviparous
Ukunakekelwa kwezinhlanzi ze-Scalar
Amanzi amadala, olunye uhlobo luhlanza izimali
Imihlahlandlela yokukhulisa izinhlanzi ze-koi